मन्त्रीको विवादित भाषण : कोरोना पत्नी जस्तै हो, नियन्त्रण गर्न सकिँदैन ! – Everest Pati
मन्त्रीको विवादित भाषण : कोरोना पत्नी जस्तै हो, नियन्त्रण गर्न सकिँदैन !
एजेन्सी। इन्डोनेसियाका उक मन्त्रीले कोरोनाभाइरसलाई महिलासँग तुलना गर्दै वि’वादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले ‘वि’द्रो’ही पत्नीहरु’सँग तुलना गर्दै कोरोनाभाइरसबारे सार्वजनिक रुपमा बोलेपछि विवादित बनेका हुन् । सामाजिक रुपमा यससँग नड’राउन पनि उनको आग्रह थियो । इन्डोनेसियाका सुरक्षामन्त्री मोहम्मद महफुद एमडीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।
उनको ‘सेक्सिस्ट’ अभिव्यक्ति लगत्तै सामाजिक सञ्जालमा महिला समूह र सामाजिक अभियन्ताहरुले उनको क’डा आ’लोचना गरेका छन् । साथै उनको अभनाइप्रति आप’त्ति जनाएका छन् । मन्त्रीले स्थानीय विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुमाझ अनलाइन मार्फत उक्त अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
महिला अधिकारकर्मीहरुले मन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिको भत्र्सना गरेका छन् । इन्डोनेसियन सरकारले सामाजिक दूरी कायम राख्न ३ लाख ४० हजार सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेको छ । जहाँ कोरोनाभाइरसका संक्रमितको संख्या २४ हजार पुगेको छ । १ हजार ४ सय ९६ जनाको मृ’त्यु भइसकेको छ ।
तोलामा सुनको भाउ २३३२ रुपैयाँले महँगियो
कोरोनाको अर्को ठुलो झट्काका लागि तयार रहन डब्ल्युएचओको चे’तावनी !